PTFE umbhobho, PTFE ityhubhu, PTFE convoluted umbhobho, PTFE waqhekeza umbhobho - Besteflon
I-PTFE idibeneyo yombhobho
I-PTFE Smooth Bore Hose
Umbhobho we-PTFE onoLuhlu oluKhawulezileyo
I-PTFE iTyhubhu edibeneyo
PTFE waqhekeza Hose
I-PTFE Hose yeNdibano
PTFE agudileyo wamzalela umbhobho
I-PTFE bore bore bore hose iqulethe i-PTFE tube liner ngqo kunye nensimbi engaphandle yentsimbi yangaphandle, Ubungakanani: 1/8 `` ukuya ku-1/8 ''.
I-PTFE ithumbu lokudibanisa
I-PTFE ithumbu elinxibe nzima linxibe i-hose enxibe ngokufanelekileyo, efanelekile kwizicelo ezahlukeneyo, inika ubhetyebhetye obuhle, ikink kunye nokuxhathisa.
I-PTFE ityhubhu enobumbano inikezela ngeekhemikhali kunye neepropathi zombane ezigqwesileyo ukusuka ku-1/8 "ngaphakathi ububanzi ukuya kwi-4" ngaphakathi ububanzi.
I-PTFE ityhubhu inokumelana kakuhle neekhemikhali, loo nto yeye-thermoplastics ...
PTFE waqhekeza umbhobho
I-PTFE yaqhekeza umbhobho kukuguquguquka kwayo okumangalisayo.Sibonelela nge-2, -3, kunye -4 ubukhulu beebhuleki, imigca yokulinganisa, okanye imigca yokubamba.
Indibano yethumbu le-PTFE
Indibano yethumbu le-PTFE ziyafumaneka zombini kunye nokutyibilika kwemikhono yomlilo.Sinokubonelela kwaye senze zonke iintlobo zeNdibano yoMbhobho we-PTFE kunye neNdibano yeHose yentsimbi ye-SS engalukanga ...
UKUZINZA KWEEKHEMIKHALI OKUPHAKAMILEYO, UKUQINISEKA KWENKQUBO YOKUPHAKATHI NOKUPHANTSI KWENKQUBO
Izinto ezihanjiswa yiBesteflon PTFE umbhobho wesinyithi osontiweyo wentombi enyulu kunye neblue
Inguqulelo emnyama emiselweyo efanelekileyo kwezona mveliso zinkulu,
i-hydraulic kunye nezicelo ezahlukeneyo.
Sikwabonelela nge-PTFE egudileyo kunye nethumbu elihlanganisiweyo / elityumkileyo elinemiphetho esisangqa,
izixhobo crimped okanye izihlanganisi ngokweemfuno ezithile. Cofa apha
Imizi-mveliso kunye naMandla
Imibhobho + Iindibano
Harley-Davidson ptfe waqhekeza umbhobho
PTFE osontiweyo umbhobho ibandla
Umbhobho omnyama weptfe
Eyona hose iptfe
Huizhou Zhongxin Besteflon Industrial Co., Ltd. yasekwa ngo-2005, ishishini eliphezulu-zobugcisa ngobungcali inxaxheba kwimveliso PTFE umbhobho R & D kunye neentengiso. Siye ngokukodwa kwiumbhobho weptfe, ptfe ityhubhu, ptfe ityhubhu edibeneyo, ptfe waqhekeza umbhobho kwaye Indibano yethumbu le-ptfekangangeminyaka eli-15. Sineeseti zezixhobo zemveliso kunye nenkqubo yovavanyo. Iimveliso zethu ngokusebenza kakuhle kunye nexabiso lokukhuphisana zithengisa ekhaya nakumazwe aphesheya.
Sineqela loyilo olusemgangathweni ophezulu kunye nenkqubo epheleleyo yoqinisekiso lomgangatho. Sixhotyiswe ngeentlobo ezininzi zezixhobo ezinje ngomtshini woxinzelelo, umvavanyi wokulinganisa ngokuchanekileyo, umvavanyi wokugquma, isixhobo sokujonga ubushushu ukuqinisekisa ukuba iimveliso zinomsebenzi olungileyo kunye nomgangatho ogqwesileyo.
Umgangatho wemveliso Imveliso ngokwayo
Dibana nomgangatho weSAE 100R14, izinto ezingafunekiyo ezingenisiweyo zisebenzisa izinto zeDajin, izixhobo zekhaya zisebenzisa iSichuan Chenguang
1. Umbhobho osontiweyo wesinyithi uya kuthathwa njengesampulu kwaye uhlolwe luvavanyo lwamanzi
2. Yonke imitha yombhobho ongenanto iya kuvavanywa ukuqina komoya
3. Ucingo lwentsimbi lwenziwe nge-316/304 yocingo lwentsimbi enomxholo we-nickel wamazwe aphesheya ≥80%. Sebenzisa i-Xiamen Donglai ucingo lwentsimbi
1. Ubomi benkonzo yesiqhelo bunokufikelela kwiminyaka engama-50 okanye ngaphezulu
2. Umhlwa kunye nokumelana neekhemikhali, akukho mpendulo kuzo zonke iikhemikhali kunye ne-solvents
Ulwazi lwamva nje kunye nokuhamba kwenkampani yethu kunye nolwazi olufanelekileyo loshishino lwe-PTFE HOSE.
Yeyiphi eyona ithumbu lamafutha lifanelekileyo？
Yintoni Stainless osontiweyo PTFE Hose？
Yintoni i-PTFE umbhobho odibeneyo | I-BSETEFLON
Umnxeba: 0086 752 7778 829
Idilesi: Umda woShishino weSijiaolou, eBoluo, eHuizhou, eGuangdong, China
© Copyright - 2020-2022: Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushu - Imephu yendawo
ptfe wawutyabeka ithumbu, Ptfe umbhobho E85, Idityaniswe iPtfe Hose - 939 / 939b, umbhobho weptfe, I-6an Ptfe Hose Assembly, ptfe yaluka ithumbu,